Ivan | Avylavitra - Miray anaty fahasamihafàna, mizara hitondra hafanàna
Tra-boina ao Anosizato Andrefana
Posted on février 25, 2008 by avylavitra
Nandalo teny amin’ny toby andraisana ireo tra-boina eny Anosizato Andrefana aho ny sabotsy (23-02-2008) maraina teo. Nanatona tao amin’ilay birao misahana sy manara-maso azy ireo izay tsy lavitra ilay toby fa eo anila eo ihany. Lehilahy roa no tao ary dia napetraka ny fanontaniana. Tsy nandà ny hamaly izy ireo saingy ilay fomba famaly kosa no nahavariana. Misy trano lay ampolony eo eny amin’ity toerana ity, ka telo no lehibe (UNICEF) ary ny sisa kosa dia kelikely miloko manga. Raha nanontany ny amin’ny isan’ny olona raisina an-tànana eo amin’ity toerana ity aho dia tsy mazava ny valinteny fa nolazaina fotsiny hoe « fianakaviana eo amin’ny 15 na mahery kely eo no anatin’ny trano lay miloko manga iray, nefa angatahanay ianao mba tsy hilaza izany fa manàla baràka antsika Malagasy.Ataovy eo amin’ny fito isaky ny trano lay eo« . Nolazaiko mantsy fa tsy ho an’ny eto an-toerana ny sary sy ny vaovao fa ho an’ireo Malagasy any am-pita. Zendana aho satria ahoana moa no ahafahana manao fanampiana mifanentana amin’ny zava-misy raha toa ka afenina toy izany ny isa tena marina. Fokontany enina avy ao anatin’ity Commune rurale Anosizato Andrefana ity no sahanin’ny toby. Efa manomboka miseho ny aretina toy ny fahasemporana izay voatery nampidirana hopitaly zaza iray, eo koa ny kohaka sy ny tazo ary ny aretin’ny vanin-taolana.
Ny tena loza dia ity: tsy hitako teny hoe aiza izy ireo no mivoaka sy midio. Olona sendra nanontaniako teo an-toby no nilaza fa dia eny amin’ny takontakona eny no manao fa tsy maharaka ny foto-drafitrasa momba izany. Eo koa ny fampiasàn’izy ireo ny rano avy amin’ny tanimbary eo akaiky eo amin’ny fiainana andavanandro. Na hidiovana sy hanasana lamba izany , na hanaovana sakafo.
Trano lay 50 hatramin’izao no fantatra fa nomen’ny BNGRC ho an’ny tra-boina miisa eo amin’ny 20.000 latsaka kely eto Antananarivo. Raha atao ny salan’isa amin’io dia manome hoe trano lay 1 ho an’olona 400. Izay mba afaka namonjy fianakaviana, na olom-pantatra moa dia arahaba soa, arahaba tsara. Fa ho an’ireo tsy afa-manoatra kosa dia ny fotaka, ny hatsiaka sy ny loto no iainana isanandro mandra-pahita izay tsaratsara kokoa noho ny anio.
Mandalo matetika ao amin’ity toby ity ny Croix Rouge mitondra izay toro-hevitra tokony hampitaina, sy mizaha ny fahasalaman’ireo mila izany. Isaorana azy ireo izany. Misy ihany koa ny mpisahana manokana ny fandriampahalemana ao (agents de sécurité) izay sady manampy ny olona ihany koa amin’ny fananganana ireo trano lay. Na ny làlana mitondra anao ho any amin’ity toby ity fotsiny aza dia efa fotaka mandrevo tsy misy toy izany. Bisikleta moa no nampiasaina ka dia mibolisatra lava eny eee!
Na dia eo aza anefa izany rehetra izany dia tsy misakana velively ny tsiky sy ny fanantenana tsy hisoritra eny amin’ny endrik’ireto Malagasy tra-pahavoazana ireto . Malagasy izay manantena ahy, miandrandra anao, miandry antsika rehetra. Na dia teny fankaherezana kely fotsiny aza mantsy dia efa fisaorana mitafotafo no andraisan’izy ireo izany. Tsaroako eto ilay ramatoa be nangataka izay mba azo atolotra hividiany kafe. Ranombavaka sy tso-drano no takalon’ilay Ar200 kely taty ampaosy nomeko azy. Dia avy daholo koa ny sasany sao mbola mba misy anjarany angamba.
Nifandrombahana avy eo ny nijery ny sary sy ny video avy nalaina. Fifanosehana re izao. Raha mba tany mantsy ianao, angamba mbola ho hafa noho izay ny fifalian’izy ireo.
Azonao atao ny mijery izany sary izany ao amin’ny www.flickr.com/photos/23374141@N04
Filed under: Andavanandrom-piainana, Tontolo | Tagged: Anosizato Andrefana, Ivan, rivo-doza, tra-boina |	Leave a comment »